In ku dhaw 100 ardey oo ka qalin jabisay Jaamacada Banaadir ee Muqdisho (Sawiro) – SBC
In ku dhaw 100 ardey oo ka qalin jabisay Jaamacada Banaadir ee Muqdisho (Sawiro)
Posted by editor on November 3, 2011 Comments
Ardey tiradoodu gaarayso 100 oo dhameystey waxbaradasho kala ah kuliyadaha caafimaadka, Injineeniriya & Computer-ka ayaa maanta xaflad qalin jabin ah loogu qabtey magalada Muqdisho ee caasimada dalka ah.
Xaflad qurux badan oo lagu maamusayey qalinjabinta ardeydan ayaa waxaa ka soo qayb galey masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen kuwa Jaamacada, macalimiin, waalidiinta ardeyda qalin jabisay iyo dad kale ayaa waxaa hadalo kala duwan ka jeediyey marti sharaftii la casuumay iyo waliba maamulka Jaamacada Banaadir.
Gudoomiyaha Jaamacada Banaadir Prof Maxamed C/qaadir oo hadal halkaasi ka jeediyey ayaa ka warbixiyey qiimaha ay waxbarashadu leedahay, isagoo ardeydii maanta qalin jabisay ugu baaqay in aqoona ay barteen ay uga faa’ideeyaan dadkooda Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa isaguna ka hadley xafladaasi hormuudka Jaamacada Banaadir Dr Maxamed Maxamuud Bidey isagoo warbixin dheer ka bixiyey taariikhdii Jaamacada iyo waliba qiimaha ay leedahay waxbarashadu waxaana uu sheegay in ardeyda maanta qalin jabinaysa ay u taal hawl dheeraad ah oo aad loogu baahan yahay inay dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan.
waax baartaa waahelaysaaan inaamanyahaay
wax barta aan waxbarta waxbata aan baerwaqo gaanee